Archive du 20170303
Voahangy Rajaonarimampianina Mitaky 10 tapitrisa Ar isaky ny minisitra ?
Minisitra mpikambana ao amin�ny governemanta sendra nisakafo sy nisotrosotro tamina toeram-pisakafoanana iray eto an-drenivohitra no tsy nahatam-bava ka namoaka ny tsiambaratelo.
Anandra Norbert Nesorina tamin�ny toerany
Tapaka nandritra ny filankevitry ny minisitra manokana natao teny amin�ny lapam-panjakana Iavoloha omaly ny fanalana ny minisitry ny filaminana anatiny Anandra Norbert.
Klioban�ny TAM Anosibe Miara-miasa amin'ny kaominina
Nitsidika ny ben�ny Ben�ny tan�na Lalao Ravalomanana teny amin�ny toeram-piasany eny amin�ny lapan�ny tan�na Analakely ny mpiangaly ny taranja baolina lavalava sy haidy mivondrona ao anatin�ny klioban�ny TAM (Tanora Anosibe Milalao) omaly.
Tiako I Madagasikara Hampiseho ny heriny eny Analakely
Mitohy ny fanaovana antsojay hataon�ny fanjakana foibe ny Fiadidiana ny tan�nan�Antananarivo Renivohitra.
Fitondrana HVM Mampibaribary ny fahantrana amin�ny fizaram-bary
Vonjy tavanandro, tsy mahafaka ny fijalian�ny vahoaka fa fanarontsaronana ny tsy fahaiza-mitondra sy ny halatra atao ny hetsika fizaram-bary itetezana faritra ataon�ny mpitondra ankehitriny, hoy ireo mponin�i Mahajanga.
Minisitry ny Fahasalamana Te ho praiminisitra ?
Tsy mety teraka ambatobevohoka ! Izay no azo ilazana ny resaka fanovana governemanta na dia efa ela ihany aza no nandrenesana izany.
Ahitsio ny lalana
Efa mba nisy fahasahiana nandray andraikitra aloha ry jean dia efa tsara a ! saingy tsy vitan�izay ny resaka, tsy hoe nandra daholo akory izahay ka hilamina sy hangiana satria noesorinareo ilay jean iray iny.
Fambolena sy fiompiana Fototry ny fampandrosoana, hoy ny talen�ny MTC
Hankalaza ny faha-15 taona niorenany ny 11 martsa ho avy izao ny Mad aid Training Center (MTC) etsy Nanisana na ilay ivontoeram-pampianarana ambony tsy miankina miompana amin�ny resaka agronomia sy tontolo iainana etsy Nanisana.
Sojabe Tsimihety Miombona alahelo amin�i Befandriana Avaratra
Nanao fanambarana ireo sojabe mpitarika ny fikambanana FFT na Fikambanan�ny Fifanaovantsoa Tsimihety fa
Ambalavelona tany Ambatofinandrahana Demokrasia no antony, hoy i Cohen Rivolala
3 taona lasa izay no nogadraina sy notapaham-bolo noho ny resaka ambalavelona ny mpitarika ny antokom-pivavahana lehibe iray, Cohen Rivolala.
ANALAKELY Niampy iray indray ny tranombarotra vaovao
Niampy iray indray ny tranombarotra vaovao etsy Analakely. Nosokafana tamim-pomba ofisialy omaly ny �Building Commerce� izay fantatry ny maro tamin�ny anarana �Tia Shop� teo aloha.
KAOMININA AMBOHIBAO ANTEHIROKA Tsy "WC" sy trano fidiovana ny 30 %-n�ny mponina
Lany andro mamono afo
Tsy mba hita soritra eto amin�ny firenentsika izany paikadim-pampandrosoana voafaritra sy maty paika izany fa dia miandry afo hirehitra ny mpitondra e ! Vokatry ny tsy fahaiza-mitantantana ny firenena dia sesilany ny olana, ka lany andro miandry izay afo hirehitra sisa vao mikoropaka.
Mpiasan'ny fitehirizan-dra -HJRA Raikitra ny fitokonana faobe tsy voafetra
Noferan�ireo mpiasa eo anivon�ny ivontoeram-pirenena momba ny fitehirizan-dra ao amin'ny hopitaly HJRA nanomboka omaly ny asa nosahanin�izy ireo.